वर्णन मिडिया उप–निर्वाचनमा कांग्रेसको सरकारविरोधी अभियान - वर्णन मिडिया
उप–निर्वाचनमा कांग्रेसको सरकारविरोधी अभियान
२३-कार्तिक-२०७६ | १२:५३:४४ pm
काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले १४ मंसिरमा हुने उपनिर्वाचनलाई सरकारविरोधी अभियानका रुपमा प्रचार प्रसार गर्दै आफ्नो पक्षमा जनलहर ल्याउन प्रयास गर्ने भएको छ । दुई तिहाईको सरकारले जनअपेक्षा अनुसारका काम गर्न नसकेको तथ्यलाई कांग्रेसले उपनिर्वाचनको प्रचार प्रसारका क्रममा उठाउने भएको छ ।
सरकार गठनको दुई वर्षमा कुनै देखाउन लायक काम सरकारले गर्न नसकेको कांग्रेसको भनाई छ । कांग्रेसले उपनिर्वाचनलाई सरकारविरुद्ध भण्डाफोरमा प्रयोग गर्ने प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले जानकारी दिए । त्यसै अनुरुपको निर्णय कांग्रेसले पदाधिकारी बैठकबाट गर्ने भएको छ । त्यसका लागि आज पदाधिकारी बैठक समेत बोलाईएको छ ।
दुई बर्षमा सरकारले गरेका चार कमजोरी लिएर कांग्रेसंले चुनावको प्रचार प्रसारका क्रममा भण्डाफोर गर्ने शर्माले बताए ।
वाइडबडी, बालुवाटार जग्गा प्रकरण, जलविद्युत् आयोजनामा भएका भ्रष्टाचारजस्ता विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर प्रचारमा जाने कांग्रेसले बताएको छ । अधिकार केन्द्रीकरण गरेर तथा ठूला आयोजनालाई प्रधानमन्त्रीमातहत ल्याएर सरकार अधिनायकवादतर्फ उन्मुख भएको कांग्रेसले आरोप लगाउदै आएको छ ।
दुई वर्षमा सरकारले जनतालाई भरोसायोग्य नतिजा दिलाउन नसकेको, लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई खतरामा पार्ने प्रयत्न गरेको प्रचार कांग्रेसले गर्नेछ ।
कांग्रेसले उपनिर्वाचनबाट सरकारको विपक्षमा र कांग्रेसको पक्षमा मत प्रकट हुने दाबी गरेको छ । ०७० मा पहिलो दल बनेको कांग्रेस ०७४ मा भएको निर्वाचनमा भने कमजोर बनेको थियो । प्रतिनिधिसभातर्फ प्रत्यक्षमा जम्मा २३ सिट जित्दा धेरै प्रभावशाली नेता पराजित हुन पुगेका थिए । पहिलोपटक अभ्यास भएको संघीय संरचनामा कांग्रेस पछाडि परेको छ । सातवटै प्रदेशमा कांग्रेस विपक्षी दलमा सीमित छ ।
१४ मंसिरमा हुने उपनिर्वाचनको तयारीसहितका विषयमा छलफल गर्न बोलाइएको पदाधिकारी बैठकमा शीर्ष नेताहरू जिल्ला–जिल्ला पुग्ने, प्रचार–प्रसारको शैली निर्धारण गर्ने र चुनावी एजेन्डाको तय गर्नेछ । उम्मेदवारी मनोनयनदेखि नै केन्द्रीय नेताहरू जिल्ला खटिएका छन् । कास्की–२, बाग्लुङ, दाङ र भक्तपुर प्रदेश सभा क्षेत्रमा केन्द्रीय नेताको उपस्थितिमा ठाउँठाउँमा चुनावीसभा गर्ने तयारी कांग्रेसको छ ।
सीमा अतिक्रमण काण्ड : प्रदर्शनमा उत्रिएका विद्यार्थीमाथि प्रहरी हस्तक्षेप, २१ नेता पक्राउ
बामदेव जस्तो नेता प्रधानमन्त्री बने कस्तो हुँदो हाे देश ?
एउटै जंगलका दुई सिंहबीच ङ्यार्.. ङुरर् …अब के हुन्छ ?
भारतले नेपालको मात्र नभई चीनको पनि सीमाना मिचेको खुलासा
नेकपा सचिवालय बैठक : मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनकाे तयारी
सवैलाई छक्क पार्दै राष्ट्रपति बने गोटबाया, सि चीनपिंग रमाए, मोदी डराए